Ama-tattoos ebhendi yomshado yothando neyokuqala | Ukuzidweba umzimba
Imidwebo yendandatho yomshado ingenye yezindlela zothando zokwenza ubudlelwano bakho bube semthethweni. Ngaphezu kwalokho, ziguquguquka kakhulu kunalokho kubonakala, njengoba, nakuba kuyindawo encane kakhulu, isekela amathuba amaningi.
Kulesi sihloko sizokutshela izinto eziningi ezihlobene ne-tattoo band band, futhi sizokunikeza ngisho namathiphu okuthi ungalumemezela kanjani uthando lwakho ukuze umlingani wakho athole umbono ngokumamatheka kusuka endlebeni kuya endlebeni nezinyembezi ezimbalwa zomzwelo. Ngaphezu kwalokho, sincoma ukuthi ufunde lokhu okunye okuthunyelwe mayelana nokuqoqa ring tattoos, obucayi nenhle.
1 Luhle kangakanani uthando: amathiphu okuzimemezela nge-tattoo
2 Imibono yama-tattoos endandatho yomshado
2.1 AmaTattoos endandatho
2.1.1 Ikhala ngophawu lwakho
2.1.2 Izindandatho zeHenna
2.1.3 Geek izindandatho
2.2 Ama-tattoos omshado ngaphandle kwamasongo
2.2.1 Amahange eminweni
2.2.2 Amadayimane amancane
2.2.3 Imiqhele yakhe naye
3 Izithombe zomdwebo wendandatho yomshado
Luhle kangakanani uthando: amathiphu okuzimemezela nge-tattoo
Ngakho, uzoziveza, futhi ngeke ukwenze noma kunjalo, ngendandatho elula engilazini ye-champagne, cha: unqume ukufaka uyinki phakathi! Okuhle kakhulu, kodwa akulimazi ukugcina amathiphu ambalwa engqondweni:
Khuluma nomdwebi we-tattoo kuqala. Mtshele umbono wakho, lokho ocabanga ukuthi umlingani wakho ufuna, futhi umtshele lapho umlingani wakho ezobona umklamo wokugcina. Vumelana naye uma ungenza izinguquko noma yini engenzeka uma umlingani wakho engawuthandi umklamo.
Ngesikhathi sika Yenza isikhathi sokubona i-tattoo, cabangela umsebenzi womlingani wakho noma amahora okufunda ukuze uqiniseke ukuthi izotholakala.
Cacisa ukuthi, ngenxa yendawo lapho i-tattoo izotholakala khona, kungenzeka kakhulu ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ilahlekelwa amandla futhi ngisho nokusulwa. Tshela umlingani wakho ngakho, uma engazi, ngosuku ozimemezela ngalo.
Yenza isitatimende kube sengathi indandatho yangempela. Ukunxephezela iqiniso lokuthi ngeke kube netshe ebhokisini, faka, isibonelo, ikhadi le-tattooist noma isampula encane yomklamo, nakuba into enothando kakhulu ukuhamba ngosuku olufanayo ozimemezele lona, kungenzeka ukuthi ekugcineni akunjalo. Omunye umqondo opholile kakhulu ukwenza i-tattoo yesikhashana ngesimo sendandatho futhi umnike ukuba agqoke kuze kube usuku uthola i-tattoo yangempela.
Futhi okokugcina: Ngikufisela inhlanhla!
Imibono yama-tattoos endandatho yomshado
Ama-tattoos endandatho yomshado enza umshado ube semthethweni futhi ayisimemezelo esihle nesimangalisayo sothando.Kodwa-ke, ungase ufune ukuphuma kancane ethrekhi noma uthande okuthile kwakudala… Sizokunikeza imibono eminingi!
Ama-tattoos ebhendi yomshado lapho ama-protagonists eyindandatho, ngokungangabazeki, angakudala kakhulu., nakuba ungakwazi futhi ukubanikeza i-twist yasekuqaleni.
Ikhala ngophawu lwakho
Njengoba unobumbano njenge-protagonist, ungayenza umzimba wendandatho yinto oyaziyo kuphela. Isibonelo, uphawu olungolwakho nje, umngcele omncane noma izinhlamvu nezinsuku ngendlela yezindandatho kukhona imibono ongaphefumulelwa ngayo.
Omunye umklamo opholile kakhulu uma kuziwa ekuphefumuleni i-tattoo nge-alliance yimingcele yesitayela se-henna. Bangakwazi ukulingisa imvelo noma ungaya kumklamo oyinkimbinkimbi, lapho imigqa neziqu kuhlanganiswa khona, njengasesithombeni, uma uthanda i-tattoo enkulu.
Kukhona izindandatho eziningi ongakhuthazwa kuzo ukuze umfelandawonye wakho ube yinto engavamile kakhulu womthala. Phakathi kwezidume kakhulu, ngaphezu kwendandatho yeFlash evela esithombeni, kukhona Indandatho Eyodwa ka INkosi yezindandatho, izindandatho eziluhlaza neziphuzi ze IziKronike zaseNarnia, indandatho yabakhi bamatshe bakaHomer noma indandatho ka Unkulunkulukazi.
Ama-tattoos omshado ngaphandle kwamasongo
Ama-tattoos alolu hlobo futhi Bangaba nezinye izici ezingezona izindandatho njengama-protagonist, kodwa lokho okutholakala kuleyo ndawo, noma ngenxa yencazelo yako, kuhlobene nemifelandawonye nomshado.
Enye yezindlela ezingcono kakhulu futhi ezisobala kakhulu zokubonisa uthando lwakho kumlingani wakho ngokudweba i-anchor emunweni wakho. Akungabazeki ukuthi incazelo, ehlanganiswe komunye nomunye, icacile ngokubheka, ikakhulukazi uma ukhetha ukuthola tattoo emunweni wakho wendandatho. Amahange nawo awumklamo olula osebenza kahle kakhulu ezitayeleni ezifana nalesi esivamile.
Uma uzifela ngedayimane kodwa ungakwazi ukukukhokhela, noma uthanda nje ukuma kwayo kwejometri, noma ufuna nje ukumemeza emhlabeni ukuthi uthembisene umshado, akukho lutho olufana nokudwetshwa kwedayimane emunweni wakho wendandatho. Uma ufuna ukuyithinta ngendlela eqondene nawe, faka igama lokuqala likazakwenu.
Imiqhele yakhe naye
Siqeda ngomunye umklamo wangempela kakhulu obhekisela ebukhosini, okuthi ngokuthile ngamunye uyinkosi noma indlovukazi yendlu yabo. Ngenxa yalesi sizathu, phakathi kwemibhangqwana kuvamile ukukhetha umklamo onelukuluku kodwa ocacile: umqhele. Ungakwazi ngisho nokufuna imiklamo efanayo ukuze uhambisane, futhi uze udlale namakhadi e-poker kancane bese ukhetha ukwengeza umbala omncane ekwakhiweni kokugcina.
Sithemba ukuthi sikunikeze imibono eminingi yokuthi kufanele uze nini isikhathi esibalulekile nokuthi kufanele unqume nini ngedizayini. Sitshele, ingabe uzoziveza nganoma iyiphi yale miklamo noma uzokhetha okuthile okuhlukile? Usuvele ukwenzile? Njengoba kwakunjalo?
Izithombe zomdwebo wendandatho yomshado
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » Izinto nezinto ezidwetshwe emzimbeni » Ama-tattoos ebhendi yomshado yothando neyokuqala